MCC पा*स हुनुपर्छ:- कांग्रेस ने’ता बडु! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
MCC पा*स हुनुपर्छ:- कांग्रेस ने’ता बडु!
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पास हुनु पर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस यूनियन अछामले बुधबार साफेबगरमा आयोजना गरेको प**त्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता बडुले एमसिसी पास भए समृद्ध नेपाल निमार्णमा टेवा पुग्ने बताउनु भएको हो ।
एमसीसी नेपालको बिकासका लागि निकै आवश्यक छ। प्रजातन्त्र सस्थागत गर्न बिकास र सम्बृद्धि पहिलो आवश्यकता हो । त्यसका लागि एमसीसी आवश्यक छ भनेर कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले हस्ताक्षर गरेको हो । एमसीसीको बिषय बारे कांग्रेस स्पस्ट छ। तर नेकपा भित्र केही दुविधा रहेको देखियो । सैन्य गठबन्धनमा जाने कुरा हाम्रो पनि समर्थन छैन ।
राज्यका सं**वैधानिक निकायहरु पनि सरकारको प्रभावमा परेर काम गरिरहेको भन्दै उक्त कुरा संविधानको मर्म विपरित भएको बताउनुभयो । ‘अ**ख्तियार सरकारको प्रभावमा परेर काम गरिरहेको छ,’ बडुले भन्नुभयो, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नमा कांग्रेसको विरोध होइन । तर कानुनको प्रयोग विभेदपूर्ण भयो । यसमा कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति छ ।’
न्या**यालयले सहि र गलत छुट्याउला तर त्यहा पु¥याउने बाटो नै गलत भयो। ललिता निवास प्रकरण बारे बोल्दै बडुले भन्नुभयो । सरकारले ल्याउन लागेका प्राय कानुन विधेयकहरु संविधानको मर्म विपरित छन् । सरकारले ल्याउने विकास बजेट सन्तुलित खालको छैन । सरकारको बजेटको प्राथमिक्ता पछाडि परेको क्षेत्रको बिकासका लागि छैन।
सुदूरपश्चिमको विकासका लागि सबै दल एक ठाउमा उभिनुपर्छ । पश्चिम सेती, अपर कर्णाली जस्ता आयोजना बन्नुपर्छ । कांग्रेसले शसक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न किन नसकेको भन्ने प्रश्नमा बडुले सरकारका गलत कामको बिरोध रचनात्मक रुपमा भैरहेको बताउनुभयो ।
‘कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्ष हो । नेकपाको जस्तो प्रतिपक्ष कांग्रेस होइन् । पाटीमा आन्तरिक विवाद हुनु सामान्य हो। तर यसले गर्दा शसक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न कुनै असर परेको छैन ।’
Previous ७० करोड काण्ड भ्रष्टाचारमा प्रमाणित भए बाँ’स्कोटालाई ८ बर्ष जेल :-कानुन
Next बाँस्कोटाले राजिनामा मात्र दिएर हुन्न, कडा सजाय दिलाईयोस्: धनपती मख्खीम’